Iwindi Elincane Eliluhlaza okwesibhakabhaka - I-Airbnb
Iwindi Elincane Eliluhlaza okwesibhakabhaka
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sia
U-Sia Ungumbungazi ovelele
Hlala futhi ujabulele!
Lesi sikhala sinamagumbi angu-2 abalulekile, indawo yemoto yakho, ikhishi elihlomele, ikhofi elisheshayo, i-WIFI ne-TV...
Kanye nezinsiza ze-shampoo, insipho yokugeza, amathawula ahlanzekile namashidi.
Qaphela: Indawo ilungele abantu abangu-4, kodwa kukhona ithuba lokufaka umata owodwa o-1 owengeziwe.
Ilungele amaqembu amancane, imindeni noma imibhangqwana.
ILa Ventanita Azul iyisitezi esisodwa, ezimele ngokuphelele futhi eyimfihlo ukusuka kuyo yonke indawo. itholakala egcekeni langaphambili lendawo eduze kwegalaji, ngaphandle kokungabaza ungasebenzisa igaraji kanye ne-patio, sinesango likagesi kanye nomthamo wokugcina izimoto ezi-4.
Igumbi lokuqala elinombhede wabantu ababili, i-TV nendawo eyanele ukuhlalisa izinto zakho.
Igumbi lesibili yigumbi lokuhlala lapho kukhona khona igumbi lokudlela kanye nemibhede emi-2 eyodwa, enye inesisekelo esiqinile kanti enye iphansi futhi lapho ingasetshenziswa ingafihlwa, ishelela kalula (ingaguqulwa ibe i- umbhede double lapho ulungise ukuphakama kumatilasi beya.
Indlu yokugezela egcwele, enekhishi elincane elinazo zonke izinto ezidingekayo.
Unezindawo zokusetshenziswa okuvamile njengendawo yokupaka lapho imoto yakho iphephile ngaphakathi kwegalaji, enye indawo ivulandi elimaphakathi, ukuze ukwazi ukuchitha intambama ethule engadini.
I-carport yamahhala emagcekeni – izikhala ezingu-4
4.87 · 89 okushiwo abanye
Le ndawo iyindawo yokuhweba, ngakho-ke uzothola izitolo eziningi zokulungisa izimoto, amabhange, izitolo zokuzisiza, sisesigcawini sokuqala sedolobha, ngakho-ke emini kukhona ukunyakaza okuningi, kodwa ebusuku kakhulu. ethule.
Uma ungena ngikunikeza okhiye futhi ngikubonise indawo.
USia Ungumbungazi ovelele